Home News War Deg Deg ah:-Al-shabaab oo sheegtay in ay burburin doonto Dagaalamayaasha Al-qaacida...
War Deg Deg ah:-Al-shabaab oo sheegtay in ay burburin doonto Dagaalamayaasha Al-qaacida ee Soomaaliya joogta!!
Dhawaanahaanba waxaa isi soo taraayay dagaalka hoose ee u dhaxeeya Al-shabaab iyo kooxda daacish taasi oo la rumeeysan yahay in ay hoos tagto Al-qaacida.
Afhayeenka Al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere ayaa waxaa uu ku goodiyay in uu cirib tiraayo Al-qaacidada soomaaliya kuwaasi oo uu ugu yeeray cudur u baahan in la dabar jaro.
Cali Maxamuud Raagge waxaa uu carabka ku dhuftay in uu amraayo Dagaalamayaasha Al-shabaab in ay fuliyaan weeraro iyo dilal kooxdaasi ka dhan ah.
Shabaab iyo daacish ayaa la rumeeysan yahay in aysan isku aragti aheeyn islamarkaana uu ka dhaxeeyo dagaal hoose oo xoogan
Previous articlePuntland oo war kasoo saartay Doorashadii Dhawaan ka dhacday Baydhabo
Next articleUhuru Kenyatta oo kala diraayo Golahiisa Wasiirada
Caruur Cudurka Jadeecada La Il Daran Oo La Dhigay Isbitaalada...
Maxaa sababay in uu baaqdo shirkii Farmaajo uu iclaamiyay